Kooxaha Serie A oo maamusaya kooxdii maratay ee Chape & Milan oo tillaabo dheeraad ah qaadday – Gool FM
(Milano) 02 Dis 2016 – Laacibka Mauro Icardi ayaa kabtanka Inter Milan ku maamuusi doona musiibadii Chapecoense, balse AC Milan oo wajahaysa Crotone ayaa qaadan doonta funaanad khaas ah oo uuba ku dheggan yahay baajka kooxdii maratay ee Chapecoense iyadoo funaanadahaas oo la iibin doono faa’iidada kasoo baxda ugu deeqi doonta naadigan reer Brazil.
Naadigan ayaa ku le’day shil dayuuradeed oo ka dhacay Colombia, jeer ay u safrayeen dalkaasi oo ay kusoo ciyaari lahaayeen final-ka Copa Sudamericana, waxaana jirtey hiillo niyadeed oo ka imanayay caalamka oo idil, iyadoo ay xitaa kooxaha reer Brazil u ballan qaadeen inay si bilaash ah ku amaahin doonaan ciyaartooydooda fasalka soo aaddan.
Fiidkan Inter Milan ayaa wajahaysa SSC Napoli kulan ka dhacaya Stadio San Paolo halkaasoo uu Icardi gacanta ku xiran doono astaanta kabtanka oo lagu dhejiyay baajka Chapecoense.
Yeelkeede, AC Milan ayaa tillaabo dheeraad ah sii qaadday iyadoo ku dhawaaqday inay kulankeeda Axadda ee ka tirsan Serie A u xiran doonto funaanad gaar ah oo ay gacanta uga dheggan tahay astaantii Chapecoense iyadoo ay ku qoran tahay ‘FORÇA CHAPE’ iyadoo la iibinna doono funaanadahaas si lacagta kasoo xaroota loogu tabarruco naadigan ay kooxdii ka le’atay.
Atalanta ayaa iyadna kulanka ay berri ciyaari doonto gacmaha ku xiran doona baajka Chapecoense marka ay booqdaan Juventus, waxaa sidoo kale daqiiqad loo aamusi doonaa dhamaanba ciyaaraha Serie A iyo B match.